Ogaden News Agency (ONA) – Iran oo Maraykanku Uga Digtay Ka Bixitaanka Heshiiskii Nukleerka.
Iran oo Maraykanku Uga Digtay Ka Bixitaanka Heshiiskii Nukleerka.
Posted by ONA Admin	/ May 7, 2018
Xassan Rooxaani, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ayaa sheegay in Maraykanku ka qoomameyn doono haddii uu ka baxo heshiiskii Nukliyeerka ee Iran uu la galay.
Madaxweynaha Maraykanka ayaa lagu wadaa in todobaadka soo socda uu ku dhawaaqo go’aanka uu ka qaatey heshiiskii shanta quwadood ee Ruushka, Faransiiska, Ingriiska, Shiinaha, Maraykanka iyo Jarmalka oo lagu daray (P5+1) ay 2015 la galeen Jammhuuriyadda Iran.
Heshiiska Iran ay la galeen dalalka awoodda badan ayaa laga soo shaqeynaayey muddo 10 sano ah, waxaana uu dhigayaa in Iran ay joojiso dhismaha quwadda Nukliyeerka, taas beddelkeedna laga qaado xayiraada caalamiga ah ee saarneyd muddada dheer.
Israel iyo Sacuudiga ayaa si weyn uga soo horjeeday heshiiskaasi oo ay saxiixday xukuumadii hore ee Maraykanka Barack Obama, waxayna hada olole markale ugu jiraan in Maraykanka heshiiskan isaga baxo. 12ka Bishan May ayaa ku eg xiliga laga doonayo Dowlada Maraykanka inay markale cusbooneysiiso heshiiskan sanadaha badan soconaya, balse Madaxweyne Donald Trump ayaa ku hanjabay in uu heshiiska ka bixi doono.
Qaramada Midoobay, France, UK, Germany, Ruushka, China iyo Midowga Yurub ayaa intaba weli taageersan heshiiskan iyagoo sheegay in Iran ay kasoo baxday shuruudihii lagu xidhay, isla markaana uu yahay heshiiskan midka kaliya ee xakameyn kara Barnaamijka nukliyeerka ee wadanka Iran.